Ndị na -emepụta ihe na ndị na -ebubata ya Pingtai
Kedu ihe dị iche n'etiti igwe ntụtụ na onye na -egwu ihe nchịkọta ụzọ njikọ njikọ Chain
Ike dị n'igwe njikọ njikọ ihe egwu egwu bụ ọkachasị na -akwado ike, akụkụ ya na -arụkwa ọrụ na nnukwu cylinder na bọket.
Bulldozer bụ ọrụ na -aga ije, ịdị arọ ya karịrị tọn iri abụọ gbakwunyere ibu ibu zuru oke, ọ bụ site na eriri kwụ ọtọ iji mee ka ụgbọ ala na -aga ọrụ, yabụ arụmọrụ n'ozuzu nke yinye bulldozer dị mma karịa excavator, Ogo ihe dị n'ozuzu na-eyi akwa 3MnB na-eguzogide.
Enwere oghere n'etiti ịdị arọ na akụkụ obe nke yinye ahụ. Ọ bụ ịla n'iyi nke igwe ihe eji eme ihe mgbe a na -eji ya eme ihe. Ọ ga -ewe ihe na -erughị obere oge ka a ga -eji eriri igwe ihe na -anya ihe.
Kedu uru dị na mgbakọ njikọ njikọ igwe egwu egwu anyị
Ihe ejiri yinye bụ 35MnB, na njikọ na pin bụ 40Cr. Ngwakọta ọkụ na iwe iwe ọkụ, ugboro ugboro n'ime na mpụga. Imezi na imezi nkenke polishing ruo 0.2. A na -ahazi usoro niile site na CNC vetikal machining center. Ya mere, iji nweta nkenke dị elu, na-eyi ihe na-eguzogide, ogologo ndụ ọrụ. Mgbe emechara mgbakọ ahụ, a na -agbapụ ngwaahịa ahụ emechara ọzọ. Ọdịdị nke yinye ahụ bụ agba agba mmiri dị mma na gburugburu ebe obibi nwere nrapado siri ike, na-eme ka ọdịdị ahụ bụrụ ihe mara mma na nke dị elu.
Sochie ozi nkọwa njikọ njikọ njikọ
Ozi nkọwa ngwaahịa
Nkọwa: Sochie njikọ njikọ njikọta mgbakọ MINING OPERATION
Ihe: 35MnB /40 nkeji
Ekweghị ekwe: HRC45-55
Nke gara aga: Akụkụ Sprocket Ekepụtara
Osote: Sochie Roller ugboro abụọ Flange
Sochie Roller ugboro abụọ Flange
Track njikọ Nche
Bit ejedebela ugboro abụọ, Onye na -egwu ihe na -agba bọket, Ihe mkpuchi ihe mkpuchi ịwụ, Ndị na -agba egwu Rubber Track, Iburu Track ala, Ike kpọchie,